XOG: Konteenar ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo lagu qabtay dekadda Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Konteenar ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo lagu qabtay dekadda Muqdisho
XOG: Konteenar ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo lagu qabtay dekadda Muqdisho
Ciidamadda ammaanka Soomaaliya ayaa marsadda magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho waxay ku qabteen konteenar ay ku jiraan waxyaabo qarxa, sidda ay ogaatey Shabakada wararka ee Warkii Online.
Saraakiil codsadey in aan qalabka warbaahinta magacyadooda aanan loo adeegsan ayaa daboolka ka qaadey in konteenarka loo wareejiyay goob gaar ah, isla markaana qorsuhu yahay in baaritaan lagu sameeyo.
Ma cadda goobta uu kusii jeedey Konteenarka, waxaase lala xiriirinayaa ganacsade, kaasi oo ay u yeereen hay’addaha nabad-gelyadda kuwaasi oo su’aallo waydiin doono halka ay kusii jeedeen.
Ammaanka dekadda Muqdisho ayaa aad loo adkeeyay, waxaana aad loo hubiyaa dhamaan waxyaabaha kasoo degaya, iyadda oo loo daabulay ciidamo dheeraad ah oo ka shaqeynaya bad-qabka dekadda.
Dhacdadan ayaa kusoo aadeysa iyadda oo warbixino laga helay dhanka ammaanka ay sheegayaan in ay suurtogal tahay weeraro ay AlShabaab ka fuliso magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho.
Previous articleMareykanka oo laga xusayo weeraradii September 11
Next articleAgaasime ku xigeenka sirdoonka Qadar oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdisho
Dowladda Oo Shaacisay In Uu Dhaqan Galay Manhaj Ay Soo Saartay
Xasan Sheekh Iyo Sheekh Shariif Oo Maanta Ku Wajahan Magaalada Baladweyne